For the Modern Empress: Chopard Imperiale Joaillerie | HIGH ရတနာအိပ်မက်
Chopard Chopard နာရီ နာရီ
ခေတ်သစ် Empress: Chopard Imperiale Joaillerie အတွက်
နိုဝင်ဘာလ 22, 2016
Chopard သည် Imperiale Joaillerie နှင့်အတူ Inca motif များမှုတ်သွင်းထားသောလျှို့ဝှက်ရတနာလက်ပတ်နာရီနှင့်အတူ“ ialကရာဇ်ကမ္ဘာများ” ကို ဖြတ်၍ ခရီးထွက်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ချစ်သူ စုဆောင်းမှုကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်၊ ခေတ်မီလှပသောစံနမူနာများအရရတနာရတနာထူးချွန်မှုနှင့်မြင့်မားသော horology ကျွမ်းကျင်မှုတို့၏ဂန္ထဝင်စတိုင်နှင့်ကြော့ရှင်းမှုပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဓိကလှုံ့ဆော်မှုနိယာမမှာtheကရာဇ်ကမ္ဘာကြီးနှင့်၎င်း၏စွမ်းအား၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်“ Empress Jewellery Box” ဆေးတောင့်စုဆောင်းမှုဖြင့်ဘိုင်ဇန်တီယမ်ကိုကျင်းပပြီးနောက်၊ Chopard ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖန်တီးမှု၏လိုင်းများဆွဲရန်, Incan ယဉ်ကျေးမှု၏ဗဟိုမှာ, တောင်အမေရိကသို့ခရီး.
၂၀၁၅ စက်တင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့သော Empress Jewellery Box Imperiale စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့။
Impériale Joaillerie ဒီအချိန်က လျှို့ဝှက်နာရီတစ် ဦး ကျောက်မျက်ရတနာနာရီ။ ၎င်း၏အပေါ်ဆုံးအဖုံးမှာစိန်နှင့်စိမ်းနှင့်တူသည် ကိုလံဘီယာမတိုင်မီကပန်းချီကားချပ်.
Imperiale Joaillerie Secret Watch သည်ပိတ်ထားပြီးဖြစ်သည်
အဖုံးကိုဖွင့်ခြင်းအားဖြင့် Imperiale ၏ထူးခြားသောဒြပ်စင်များပေါ်ထွက်လာသည်။ ၄ င်းကိုရောမနံပါတ်များ၊ ချွန်ထက်သောလက်များနှင့်characteristicကရာဇ်မင်းများသည်သူတို့၏ပုံမှန်အမှတ်အသားများကိုဖော်ထုတ်လေ့ရှိသည့်နေရာများ၊
အဆုံးတွင် 38mm Case's handles ၏ပုံသဏ္asာန်၊ စိန်နှင့်အတူသတ်မှတ်ထားသောစက္ကန့်စက္ကန့်အမှတ်အသားအဖြစ်ထူးခြားသည့်အမှတ်အသားတစ်ခုနှင့်တူသော motif တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပွင့်လင်း Imperiale Joaillerie Secret Watch
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုရှိပါတယ် တစ်ကိုယ်တော် အင်ကာယဉ်ကျေးမှုကိုကိုးကွယ်သောနေဘုရားသခင်အားကိုးကွယ်ရန်အလှဆင်ခြင်း။
ဤ "Incan" ဗားရှင်း Imperiale Joaillerie လက်ပတ်နာရီသည်အပြာရောင်သို့မဟုတ်စိမ်းရောင်ပြာရောင်သို့မဟုတ်စိမ်းအပြာရောင်မွှားပါသည့်ကြိုးများပါရှိသည်။ 18k Fairmined အဖြူရောင်ရွှေရောင်အိတ်ကိုစိန်နှင့်လုံး ၀ တပ်ဆင်ထားသည် LUC 96.12-L ကိုအလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုFleurier ရှိ Chopard ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောလက်ဖြင့်ထွင်းထုသည်။ CC
Tags:chopard • နာရီ
မှတ်ချက်0ခုခေတ်သစ် Empress: Chopard Imperiale Joaillerie အတွက်"